जनप्रतिनिधिसँग मनका कुरा — News of The World
साहित्यकार एवं भाषाविज्ञ पोखरेलको निधन
राष्ट्र बैंकको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम, सात क्षेत्रका लागि र पाँच करोडसम्मको सहुलियत
Call to make literacy campaign successful
बाँकेमा अझै १३ प्रतिशत हात्तीपाइले रोगका बिरामी
पहिलोपटक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट ६१५ लाभान्वित
राउटे समुदायलाई जागिरमा मासिक तलब एक हजार ५००
जनप्रतिनिधिसँग मनका कुरा
बद्रीप्रसाद सिवाकोटीआश्विन ४, २०७५
मानिसहरु धेरै कुरा गर्छन । सबै कुरा नराम्रा नहुन सक्छन । नेपाली समाजमा खास गरी अरुको कुरा काट्ने र आलोचना गर्ने बानी परिसकेको छ । यो बानीलाई विस्तारै सकारात्मक बनाउने र आत्मालोचना गर्ने हो भने हरेक समूहमा गरिने गफगाफ संवादको रुपमा लिन सकिन्छ । संवादको निष्कर्श समाज रुपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । विशेष गरेर विहान बेलुका चिया पसल र क्याफेहरुमा भेला हुने र आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक र नागरिक तथा राजनैतिक विषयमा गरिने कुराकानीमा धेरै राम्रा विचारहरु सुन्ने गरिन्छ । फुर्सदमा गरिने एक अर्काका विचार र सूचना आदनप्रदानले मानसिक तथा बौदिक विकास हुन्छ । कतिपय कमी कम्जोरीको सुधार गर्ने अवस पनि मिल्न सक्छ । सत्य र सहि विचारको कदर गर्न र सरोकारवालाहरुको पहुँचसम्म पुग्न यस प्रकारको संवादले मदत गर्दछ । तर, हाम्रो समाजमा असल विचार र सुझावहरुको अभिलेखिकरण गर्ने अभ्यास छैन । २०७५ भदौ ५ गते नागरिक समाज र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सातदोबाटोस्थित युनिक क्याफेमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्त गरिएका विचारहरु समय सान्दर्भि हुन सक्छन ।
अधिकारकर्मी कृृष्ण गौतमले “नागरिक संगठन र जनप्रतिनिधिको बीच समन्वयको अभाव हुन नदिन निरन्तर सम्वाद र समन्वयको अभाव हुँदा नागगकिको हितमा गरिने कतिपय काममा कठीनाइ हुनेगरेको छ । समाज कल्याण परिषद जनअपेक्षा अनुरुप चलेको छैन । त्यसमा गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व छैन । जसकालागि हो उसैको प्रतिनिधित्व नभएका संयन्त्रहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ?” ऐन, कानुन र नीतिनियम समयसापेक्ष बनाउने क्रममा एनजीओको लागि कस्तो कस्तो चुनौति आउने हो ? विगतका विकृति सुधार्ने वा थप जटिलता शिर्जना गर्ने कानुनको पर्खाइमा रहेको बताए ।
पत्रकार अमृत तिमिल्सिनाका अनुसार “स्वसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ । अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधि भए सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्छ । मेडिया र जनप्रतिनिधिहरु बीच सम्पर्क समन्वयको अभाव हुन हुदैन । लोकतन्त्रमा आर्थिक समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्न सरोकारपक्षको निरन्तर संवादको आवश्यक छ ।”
वातावरण पत्रकार समिन शर्मा “जनप्रतिनिधिहरुले सूचना सजिलै नदिने गरेको गुनासो सुनाउँछन् । कतिपय स्थानको समाचार आउन नसकेको कारण पत्रकारका आफ्नै समस्या छन । कर बढाएको विषयले बढि चर्चा पाएको छ । कर बढाउने भन्दा करको दायरा बढाउनु पर्छ । करको सदुपयोग हुनुपर्छ ।
“स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक संगठन र संचारकर्मीको् समन्वय नहुँदा एक अर्काको साथ सहयोग रहँदैन । नागरिक संगठनलाई जनप्रतिनिधिले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक पर्ने हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई समृद्धि बनाउने हो भने हामी बीच संवाद हुनु पर्छ ।” यो भनाई अधिकारकर्मी श्री रमेश प्रसाद तिमिल्सिनाको हो ।
गैर सरकारी महासंघ नेपालका रामहरी घिमिरेले गैर सरकारी सस्था महासंघ नेपालसँग आबद्ध भएका ६ हजार सस्था मध्य ललितपुरमा मात्र दुई सय वटा छन् । नेपाल भित्र ल्याइएका स्रोत मध्य चार प्रतिशत मात्र गैर–सरकारी सस्थामार्फ लगानी गरिएको छ भने ९६ प्रतिशत नेपाल सरकारमार्फत लगानी गरिएको छ । गैर सरकारी सस्थाले निश्चित गरिएका लक्षित समूदायमा केन्द्रित भइ काम गर्दछ । सरकारले आम नागरिकप्रति लक्षित भइ काम गर्छ । कुरा यति हो, उद्देश्य एउटै भएपनि भूमिकामा फरक छ । कर प्रगतिशील हुनुपर्छ । वैज्ञानि वितरण प्रणाली र प्रगतिशील करको व्यवस्था हुनु पर्छ । गैर सरकारी सस्थाहरु र स्थानीय सरकार आफ्नाआफ्नै ढंगले चल्नु हुदैन ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपमेयर श्री निर्मला थापाको अभिव्यक्तिबाट थाहा भयो की कर्मचारी व्यवस्थापनले समय लियो । करको विषयमा सुरुमा गुनासा नसुनिएका होइनन् । तर, पछि विस्तारै कुरो बुझेपछि त्यसको प्रशंसानै भएको पाएको छु । महालक्ष्मी नगरपालिकाले कुनै त्यस्तो हल्लामा फैलिएको जस्तो कर लगाएको छैन । न्यायोचित कर उठाइने गरेको छ । कसैले असहमत देखाएका पनि छैनन । कर जनताको चाहना अनुरुपको हुनुपर्छ । कर बढाउनेभन्दा करको दाहेरा बढाउनु पर्छ । हाम्रा वडामा उठाइएको करको ७५ प्रतिशत रकम वडाकै विकासमा खर्च गरिन्छ । प्रत्यक कामको योजना वडाले बनाउँछ । चारचार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको छ । यसले जनताका गुनासा सुन्न र त्यसको सहि सम्बोधन गर्न सजिलो भएको अनुभव बढ्दै छ । संघीय उत्कृष्ट व्यवस्था हो ।
आलोचना गर्ने संस्कार हामीमा हटेको छैन । सबै कुराको आलोचनाले मात्र काम गर्दैन । मलाई पत्रकारले पिछा गरे, पैसा मागे, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर धम्क्याए तर हामी सहि काम गर्दै गर्दा पैसा पनि दिएनौ र डराएनौ पनि । सबै पत्रकार खराब छन भन्ने मेरो आसय हैन । सबै पत्रकार दुधले नुहाएका छैनन् । नगरपालिकाले गरेका राम्रा कुरा पनि प्रसारण गर्न सक्नुपर्छ तर विकृति सबै ठाउँमा छ, विस्तारै सुधार गर्दै जानु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नगरपालिका जानकार छ । समश्याको समाधान विरोध होइन, सहयोग र समझदारी हो । हाम्रा सबै सूचना। धधध।mबजबबिहmष्।नयख।लउ वेबसाइडमा हेर्न र पढ्न सकिन्छ । नगरपालिकामा भ्रष्टचारी कर्मचारीलाई हायर एण्ड फायर गर्ने भनेका छौं, गछौं पनि । महा लक्ष्मी नगरपालिकामा वडा अध्यक्षले बार्षिक तीन लाखसम्म नागरिकको आपत विपतमा सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभा ३ का सभासद श्री चेतनाथ सञ्ञ्जेल भन्छन “संघ सस्था दर्ता विधेयक संसदमा पेश गरिएको अवस्था छ । करको अफवा फैल्याएर संघीय राज्यलाई कम्जोर बनाउन खोजिएको हो । कर छलेर करोडौ कमाउनेलाई अनुगमन गर्नै पर्छ । कसैलेपनि कर बढि लिएको वा नलाग्ने कर लगाएको प्रमाणसहित आए कानुनी कावाही गरिन्छ । अहिलेसम्म कुनै प्रमाण लिएर कर बढि लिएको भन्ने उजुरी परेको थाहा छैन । ”
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ का वडा अध्यक्ष श्री सुदर्शन मिश्रको विचार “संघीयता जनताले धान्न नसक्ने रहेछ भन्छन । उनका विचारमा असन्तुष्टि दुई प्रकारका हुन्छन, असन्तुष्टिले कि त सुधार गर्छ , कि त बिगार । राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ । तर, कर घटाइयो भने विकास बजेटबाट चुड्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो गरियो भने भ्रष्टचार लाग्छ । त्यसो गरिएन भने कामको चाप थेग्न सकिन्न । यो शब्दले खाने देश हो । गाउँको मानिस सिंहदरबारतिर आउनु परेको छ । वडा कार्यालयबाट नागरिकता दिन सक्नुपथ्र्यो । त्यो भएन । हचुवाको भरमा समाचार आउने गरेकोमा दुःख लाग्छ, कार्यक्रम गर्दा समन्वय गर्नुपर्छ । म पत्रकारसँग नडराउने मानिस हुँ । वास्तविकता नबुझिकन गरिने पत्रकारिताप्रति मेरो आपत्ती छ । योजना तर्जुमा गर्दा नागरिक समाजसँग मिलेर गरेका छौं । नक्सा विनाका घर हटाउन पत्रकारले, नागरिक समाजले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीयता थाम्न सकिन्न । धर्म निरपेक्षा जनताले चाहेको व्यवस्था होइन । जनताका काम गर्न धेरै चुनौती छन् । बाटो खोल्न सकेका छैनौ । हामीले राज्यको कानून नमान्नेलाई वडाको सिफारिस दिने गरेका छैनौ ।”
महाकाल गाउँपालिकाका वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष श्री खोमप्रसाद दाहाल बताउछन् “गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने र सिक्ने कुरा धेरै छन् । चुनाबको दौडानमा जुन उत्साह थियो त्यो मर्दै छ । यसै गरी वडा नं ३ का वडाध्यक्ष गंगाराम तिमिल्सिनालाई नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्दा सजिलो लाग्छ । जनता आफैले गर्न सक्ने सानो मसिनो काम पनि सरकारले गरिदियोस भन्ने ठान्छन् । धेरै समश्या छन, नागरिक संगठनहरु र संचारका साथीहरु सहयोग गर्ने अपेक्षा छ, उनको । अतिआवस्यक क्षेत्रमा मात्र कर लगाउने अरुलाई छुट दिने गरेको भए हुन्थ्यो । कर्णाली प्रदेशमा उधोग गर्न आउनेलाई १० बर्ष कर छुट दिने भन्ने कुरा चलेको थियो, त्यो सेलायो । करसम्बन्धी सरकारले छिटो अभिमुखीकरण गरिदिनु पर्छ । यो पहिलै गर्नुपथ्यो । सरकार सहजिकरण गर्न चुकेको हो ।”
त्यो दिन, ती जागरुक व्याक्तित्वहरुको प्रस्तुतीले समन्वयको अभाव, करसम्बन्धी चर्चा, नागरिक संगठन र जनप्रतिनिधिहरुका समश्या र जोस जाँगर उत्साहको उताबचढाब साथै संघीय राज्य व्यवस्थाप्रतिको आशंका जस्ता विषयले स्थान बनायो । अन्ततः यसप्रकारको संवादबाट प्रगतिशील दिशा नियाल्न सहयोग पुग्ने र यसको निरन्तरता आवश्य छ भन्ने निष्कर्शमा प¥ुयाएको थियो ।
फोटो सौजन्यः रमेशप्रसाद तिमिल्सिना
मैले सोचेको र भोगेको अफ्रिका (तस्बिर सहित)
बेथितिका बारेमा कोहि त बोलौ !
फेसबुकले कर छलेको किन कसैले लेख्दैनन् ?